Wasiirka Cusub iyo Shaqaalaha Xafiiska Arimaha Bulshada Ayaa Yeeshay Kulan Dardargalin Shaqo Ah. - Cakaara News
Jigjiga(CN) Talaado Oct-28-2014.Sanadkan 2007da ayaa ah sanadkii ugu Danbeeyay ee hirgalinta qorshaha kobaca Dhaqaalaha ee dalku dhigtay ee uu kaga mid noqonayo wadamada Dhaqaalahoodu dhex dhexaadka yahay iyadoo 4sano ee ugu danbaysay deegaanka soomalida itoobiya laga hirgaliyay horumar kala duwan oo dhinacyo badanl eh taasoo bulshada looga faa`iidaynayo qaybna ka ah xaqiijinta qorshaha isbadalka kobaca dhaqaalaha Ee dalka iyo Deegaankuba hiigsanayaan.
Hadaba si qorshahaasi loo xaqiijiyo qaybta kaga aadan xafiiska Shaqaalaha iyo arimaha bulshada DDSI ayaa yeeshay kulan lagu Dardar galinayo qorshaha shaqo ee sanadkan 2007da uyaala Xafiiska si looga midho dhaliyo Qorshayaasha Kobaca Dhaqaale ee GTP iyo SPM-ka Deegaanka si loo kobciyo dhaqaalaha wadana.
Waxaana kulankani ka Hadlay Wasiirka Xafiiska Shaqaalaha iyo Arimaha Bulshada Mudane Axmed Maxamed Koore oo ka mid ah golihii capinetka xukuumada ee dhawaan la dhisay horena u ahaa gudoomiyaha Degmada Xamaro. Wasiirka oo sharax ka bixiyay jihooyinka iyo qorshayaasha kobaca dhaqaale ee la hiigsanayo ayaa sheegay in shaqaalaha xafiiska looga fadhiyo inay guntiga dhiisha isaga dhigaan sidii qorshaha uyaala xafiiska ay kaalinta kaga aadan uga qaadan lahaayeen isla markana usii xoojin lahaayeen Adeegyada ay bulshada uhayaan iyaga oo raacaya qorshaha sanadlaha ah ee Xafiisku dhigtay kuna suntan 4ta Rubac ee sanadku ka kooban yahay,islamarkaana la sii xoojiyo Gudi ku shaqaynta(Team Work).
Dhankooda shaqaalaha ka hawl gala waaxaha kala duwan Ee xafiiska ee kasoo qayb galay kulankan ayaa balan qaaday inay ka soo bixi doonaan xilka iyo waajibaadka shaqo ee ay u hayaan bulshada xoogana saari doonaan hirgalinta waxqabadka ee ku xusan Qorshaha Xafiiska iyo isdhaafsiga xogaha iyo natiijada shaqada.
kulankan ay yeesheen maamulka iyo shaqaalaha xafiiska shaqaalaha iyo arimaha bulshada ayaa ah mid lagu dardargalinayo qorshayaasha uyaala xafiiska sanadkan 2007da maadama lagu jiro sanadkii ugu danbeeyay ee hirgalinta qorshaha 5ta sano ee dalka uyaala(Growth Transformation Plan).